Soo dejisan Avira AntiVir 4.3 – Android – Vessoft
Avira – software ah si ay u bixiyaan howlgal ammaan ah qalab nidaamka. Avira ogaadaa iyo blocks software waxyeello adigoo isticmaalaya scan automatic ah codsiyada inta ay rakibo ama kor u versions cusub. Software waxay bixisaa ilaalinta xogta shakhsiga ah email iyo in xusuusta qalab ka dhanka ah jabsaday ama xaday. Avira awood u si ay u qeexaan meel ka mid ah qalabka looga badiyay oo uu awood u leeyahay in meel fog laga xannibi ama tirtirto xogta haddii loo baahdo. Avira sidoo kale ballan qaadayaa ilaalinta ah ka gees ah oo ku baaqay in aan la rabin oo SMS khatar ah.
Ogaadaa oo Fayda furin
Ilaalinta Xogta laga xatooyo
Block Remote ah qalab lumay
Joojinta wicitaanada soo socda oo SMS
English, Українська, Español, Português... OneNote 15.1.6319.4426
العربية, English, Français, Español... Hangouts 4.0.100406486